वर्षेनी १ हजार चिनियाँ विद्यार्थी आयुर्वेद र योग अध्ययन गर्न नेपाल आउने
scheduleशुक्रवार फाल्गुन ९ गते, २०७६
काठमाडौं, ४ भदौ । चीनले योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद तथा जडिबुटी सम्बन्धी अध्ययन गर्न आफ्ना देशका विद्यार्थीलाई नेपाल पठाउन तयार भएको छ ।
चीन सरकारले वार्षिक १ हजार विद्यार्थीलाई योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद तथा जडिबुटीसम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल पठाउन लागेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालले योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद तथा जडिबुटी सम्बन्धी नयाँ पाठ्यक्रम बनाएपछि चीन सरकारले आफ्ना विद्यार्थीलाई योग शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाल पठाउने इच्छा व्यक्त गरेको हो ।
बुधबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल तथा बेइजिङ नर्मल युनिभर्सिटीका प्रोफेसर प्रो. लिउ सिआओबीच भएको भेटमा थिङले योग शिक्षा अध्ययन गर्न नेपाल उपयुक्त मुलुक भएकोले विद्यार्थी पठाउन तयार रहेको बताएका थिए ।
भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद तथा जडिबुटी पाठ्यक्रम आफ्नो चासोको विषय भएकोले तुरुन्तै आवश्यक छलफल र तयारी गरि पाठ्यक्रम लागू गर्ने बताए ।मन्त्री पोखरेलले योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद तथा जडिबुटी विषय देशको अहिलेको आवश्यकताको भएको भन्दै गुणस्तरीय शिक्षा दिने विश्वास दिलाए ।
काठमाडौंमा मंगलबारदेखि जारी मार्क्सवाद र एसियाली दर्शन अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रोफेसर थिङ नेपाल आएका हुन् ।
डोरी टाँगेर सहयोग माग्दै गरेका बालकको मृत्यु
त्रिभुवन विमानस्थलमा उडान अवतरण प्रभावित, अन्तर्राष्ट्रिय उडान होल्डमा
गैँडा मर्नेक्रम बढेपछि नयाँ घाँसे मैदान व्यवस्थापन गरिँदै
डोलेश्वरदेखि कैलाशपतिसम्ममा दर्शनार्थीको घुइँचो
जनकपुर–जयनगर रेल आधुनिक सुविधासहित असारभित्रै सञ्चालनमा
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली शुक्रबार जेनेभा जाँदै
न्यायालयको सुधारमा लागिपरेको छु : प्रधानन्यायाधीश जबरा
एनआईसी एशिया बैंकमा खाता खोल्दा अधिकतम २ लाख १४ हजार रूपैयाँसम्म फाइदा
अडियो प्रकरणः बाँस्कोटासँग भेटघाट तय नभएको स्विस दूताबासको स्पष्टोक्ति (वक्तव्यसहित)
दोलखाको भीमेश्वर मन्दिरमा पसिना !
आकर्षक युवतीहरुको देश, जहाँ विश्वभरका केटाहरु दुलही खोज्न जान्छन्
एजेन्सी । मानिसहरु सकेसम्म आफ्नी प्रेमिका वा श्रीमती राम्रै होस् भन्ने चाहन्छन् । कतिपय त बिहे गर्ने बेलामा अनुहार राम्रो...
कोरोना भाइरस जैविक हतियार हो ? के भन्छ चीन ?
एजेन्सी, ९ फाल्गुन । विश्वका महाशक्ति राष्ट्रमध्येको एक चीनमा पछिल्लो डेढ महिलादेखि कोरोना भाइरसको संकट देखिएको छ । यस महामारीले...
अचम्मको जीवन शैली, जहाँका मानिस नुनको घरमा बस्छन् र नुन नै खान्छन्
एजेन्सी । इथोपियाको एल साँदका मान्छेहरु नुन मात्र खान्छन् र नुनकै घरमा बस्छन् । केही वर्ष अगाडि ज्वालामुखी विस्फोटन भएकाले...
सोनभद्र पहाडमा ठूलो सुन खानी, ३ हजार टन सुन रहेको पुष्टि
एजेन्सी, ९ फाल्गुन । भारतको उत्तर प्रदेशमा सुनको ठूलो भण्डार फेला परेको छ । उत्तर प्रदेशको सोनभद्रस्थित पहाडी इलाकामा सुनको...
कोरोना भाइसः चीनमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २२३३ पुग्याे
काठमाडौँ, ९ फाल्गुन । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट चीनभरी मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या २२३३ पुगेको चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीहरुले...
‘म चाहन्छु नेयमार रियल मड्रिड आउन्’
काठमाडौँ, ९ फाल्गुन । रियल मड्रिडका खेलाडी काशिमेरोले नेयमारबारे आफ्नो टिप्पणी दिएका छन् । नेयमारलाई रियलमा आउन उनले सुझाव...
अजय देवगनको ‘तान्हाजी’ले अक्षय कुमारको रेकर्ड तोड्यो, ६ हप्ताको कमाइ कति ?
एजेन्सी, ९ फाल्गुन । अजय देवगन , काजोल र सैफ अली खानको ‘तान्हाजी: द अनसङ वारियर’ले बक्स अफिसमा ४२ औं दिनसम्म पनि धमाका मच्चाइरहेको...
कोरोना भाइरसको स्रोत सालकको मासुः चिनियाँ अनुसन्धानकर्ता
एजेन्सी, ९ फाल्गुन । विश्वभर मानवपछि सबैभन्दा बढी अवैध कारोबार र तस्करी हुने स्तनधारी जनावारमा सालक पर्छ । विशेषगरी चीन र...